Gawraca iyo gaalaysiinta diinta loogu gabbaday! W/Q Sh Axmed C/samad
13/01/2014 - 18:19:14 Maqaallada 0 3285 Super Admin
Waa maqaal qiime badan oo Daawuud Alcutaybi uu kaga hadlay kooxda la magacbaxday DOWLADDA ISLAAMIGA EE CIRAAQ IYO SHAAM, kooxdaas oo ummaddii reer Suuriya isugu dartay dil, ihaanayn, gaalaysiin iyo cadaadis iyada oo adeegsanaysa magaca islaamka iyo jihaadka.
Warbixin: Somalidii U badnayd ee Sanadkaan lagu laayey wadanka South Africa
30/12/2013 - 22:14:57 Maqaallada 0 3829 Super Admin
Illaa 80 Soomaali ah ayaa sanadkani lagu diley Koonfur Afrika sida ay muujinayaan tirakoob lagu kalsoonyahay, iyada oo ay dhaceen gaboodfalo kale oo boqolaal ah sida boob iyo dhac loo geystey ganacsiyadda Soomaalida.
Xog baan hayaa ee xabsiga I dhiga iyo:Shaki ayaa jiree Shaatiga ii cadeeya W/Q Sh Shible
27/12/2013 - 03:57:38 Maqaallada 0 3598 Super Admin
Waayaha aduunku maalinba waxbaa laga bartaa, mar walibana wax aadan filayn ayaa kaa soo mara, qofka dhugta leh wuxuu ka dhaxlaa dhaayo anfaca, dhagar banadanna wuu kaga badbaadaa.Waxaan maanta halkan kuugu soo gudbinayaa qiso dhacday oo dhakafaar badan, waxaana ku soo gunaanadi doonaa — in sha Allaah…
Raysal Wasaaraha Cusub Cabduweli Sheykh Iyo Hawsha Sugeysa
24/12/2013 - 21:46:06 Maqaallada 1 3358 Super Admin
Ummad walba waxaa sababa in ay horay-ummarto ama dib u dhacdo iraadada Ilaahay kasokow madaxdeeda. Ilaa 12kii sano ee u dambeeyey waxaa laga dhamman waayey is-qabqabsiga madaxda Soomalida taas oo ragaadisay howlihii qaran burburay.
Waayo-waayo iyo taariikh xiise leh.
17/09/2012 - 01:11:00 Maqaallada 0 2052 Super Admin
Waa abaarihii Sanadkii 1972 magaalladu waa Caasimadii Bilicsaneyd ee Xamar, xaafaduhu waa Waaberi & Hodan, Dugsiguna waa Dugsi markaas cusub oo hal sano uun dhisan waa Dugsiga 21 oktoobar oo la furay sannadkii 1971 waxaana dhisay ururka Midowga yurub sida uu u dhisay 15 May & General Daaud ba.
Looge laguu minan fadhiyee: (Doorta Jawaari kale) by: Maxamuud Musse Cali Caarre
05/09/2012 - 23:49:27 Maqaallada 1 4725 Super Admin
idii, dabayaaqadii Bishii Agoosto 2012, loo xaqiijiyey Guddoomiye Barlammaan u doorashadii Professor Maxamed Cisman Jawari; miidaanka Soomaaliyeed waxa hadheeyey riyaaq iyo rayrayn; su'aalo iyo is-toyasho iyo dood iyo falan-qayn ku saabsan dhacdo munaasabadeeddii (28/08/2012) lagu cubtamay Guddoonka…
Ma Eed Mise Amaan Warbaahinta Soomaaliyeed ee Maanta. W/D:Mohammud Hassan Idaajaa
05/09/2012 - 01:13:07 Maqaallada 0 4464 Super Admin
Marka aad maqasho magaca Wariye (Warfidiye) waa ruux leh maskax nadiif ah kuna darsaday aqoon iyo aqlaaq aan ujeedo maldahan lahayn, kana madax banaan dan shaqsiyadeed iyo ujeedooyin qariban oo aan waxba dhisayn hormarka dhankiisana u xaglinayn
SPEAKER IYO AFHAYEEN MAXAY KALA YIHIIN?
31/08/2012 - 16:32:41 Maqaallada 0 4285 Super Admin
In muddo ah ba waxaan la rafanaayay in aan kala saaro oo haddii aan khaldanahayna la ii sheego labada magac oo Af-Ingiriiska lagu kala yiraahdo:
Maad Siyaasadeed : Musharraxa Eberland ama Sufur State iyo waxqabadkiisa hadii la doorto
27/07/2012 - 22:51:25 Maqaallada 0 4481 Super Admin
Musharaxa Eberland ama Sufur State iyo waxqabadkiisa hadii la doorto:
Maqaal Siyaasadeed, Girigiri Republic, Ex-president Mahiga, Hiiraan ma dhaliis miyaa? + Goos goos siyaasadeed.
25/05/2012 - 03:07:31 Maqaallada 0 5402 Super Admin
Girigiri waa xaafad ku taala magaalada Nairobi,waxaana degan wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee jamciyadda quruumaha ,waa xaruntii la wareegtay howlihii Villa Somalia , Girigiri hadda waxaa laga maamulaa dalka somalia, xafiis hoosaadna waxeey ku leedahay XALANE-mogadishu waana xafiiska labaad ee…
Shabaabka Somalia ka dagaalamaysa laguma sheegi karo Mujahidiin diinta difaacaya.
12/05/2012 - 17:52:15 Maqaallada 1 4782 Super Admin
Waxaa is weydiin leh in qof kasta oo dadka xasuuqaa uu ciidamadiisa dadka u laaya si uu ugu dan xun gaadho ku dhaho waxaad tihiin mujaahidiin jannadana kabaha la idiinka saari maayo
Gacan Hadal ka Dhacay Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliyeed ee Muqdisho.
14/12/2011 - 18:33:55 Maqaallada 0 729 Super Admin
Cismaan Caato ayaa wuxuu ka hadlay dhacdadii maanta ka dhacday Xaruunta Golaha Shacabka ee magaaladda Muqdisho, isagoo dhinaca kalana sheegay in loola soo baxay bistoolado.
01/12/2011 - 22:30:15 Maqaallada 0 5652 Super Admin
Dadka dhahay dimoqaraadiyadda Islaamka ayaan ku dhaqmaynaa wax aayad ah iyo xadiis midna uma haystaan. Waxaan markii ugu horraysay ka maqlay mas'uuoliyiinta ummadda reer Puntland in ay samaysteen diin cuusb oo la dhaho dimoqaraadiyada Islaamka ama slamic democracy oo 41 qodob ay ka soo qaateen diinta…
Way cadaatay in ay Shabaabku yihiin mooryaan diimeed — By G/le Sare Omer Suleiman Ali
15/09/2011 - 16:10:43 Maqaallada 0 3877 Super Admin
Waxaan akhriyey warqaddii hanjabaadda ahayd ee uu qoray ninka la dhaho Fu'aad Shangole oo ka tirsan Shabaabta. Waxaan la yaabay nin sheeganaya diin Islaam ah oo waxaas xun ee aan diinta shaqada ku lahayn ku hadlay. Sida sawirka Shangole ka muuqata waa nin dhallin yaro ah oo aan gaadhin da' uu ku noqdo…
Waxaa La Gaaray Xilligii Geyiga Soomaaliyeed Lagu Fidinlahaa Gogoshii Nabadgalyada U Horseedilahayd Soomaaliya
12/01/2011 - 19:23:37 Maqaallada 1 4699 Super Admin
Asalaamu Caleykum Waraxmatullaahi Wabarakaatuhu. Ilaahay ayaan u mahadcelinayaa, noo doortay diinta islaamka iyo kamidnoqoshada ummada Nabigeena Suuban Muxammad S.C.W.
GABADH ALLE KA CABSATAY ALLENA CISEEYEY (qiso dhab)
17/11/2010 - 09:01:49 Maqaallada 1 5202 Super Admin
Waxaa la sheegay in uu nin guursaday gabadh aad u qurux badan aad buu u jeclaa iyaduna aad bay u jeclayd laakiin waqtiga duruufihiisa ayaa ku khasbay ninkii in uu u safro magaalo kale si uu u raadsado maciishad iyo biil reerkiisu ku noolaado. Intii aanu ka bixitimin reerkiisii waxaa uu doonay cid uu…
Fu’aad Shangole yaa ka mudan Xilka Ra’iisul Wasaaraha?
27/10/2010 - 10:24:01 Maqaallada 3 6284 Super Admin
Marka dib loogu laabto jiritaanka Dowlada Soomaaliya ee hadda dhisan waxa ka dhex muuqda raggii ugu tunka weynaa dagaaladii lagu hoobtay ee bilowgooda ahaa aas aaskii Maxkamadihii Shareecada balse isbadal ayaa dhacay oo waa la kala jeestay.
The Youth of Somalia: A Call for a Different Action
26/10/2010 - 07:06:39 Maqaallada 0 4563 Super Admin
If one had to explain how The Republic of Somalia can emerge from the ashes of war in three simple words, they would be: peace, diplomacy and education.
Weriye ka tirsan Jariidada Ahram oo warbaxin xasaasi ah ka qoray Puntland
08/10/2010 - 08:41:17 Maqaallada 0 3346 Super Admin
Weriye ka tirsan wergeyska Al- Ahram ee ka soo baxa dalka Masar laguna magacaabo Ayman Al-Siisi oo booqasho aan gabasho lahayn ku maray goobaha xasaasiga ah ee Puntland bishiiJuly ee ee sa nadkan isla markana weriysiyo kala gedisan la yeeshay masuuliyin ka tirsan Puntland iyo hogaamiyaasha burcadeedka…
Maxaad ka taqaanaa Magcyada golaha fulinta ee kooxda Shabaab iyo xilalka ay u hayaan shabaab
25/09/2010 - 18:15:39 Maqaallada 1 6488 Super Admin
Waa golaha fulinta qaybta somalida ugu jirta oo ah 42 xubnood guud ahaan waa 85 inta kale waa ajaanib waxaana horjooge u ahaa qaybta soo duulayasha Khalid Al-muhajir Al-musdafaa oo ku geeriyooday dagaalladii ugu dambeeyay Waxa u u dhashay dalka Pakistan, ragaani dagaalada ma galaan, laakiin waxeey abaabulaan…